Faahfaahin ka soo baxaysa weerarkii Ra’isalwasaaraha cusub ee Talyaaniga – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa weerarkii Ra’isalwasaaraha cusub ee Talyaaniga
Faahfaahin dheerad ah ayaa ka soo baxaysa weerar nin hubaysan oo nolashiisa ka rajo dhigay uu ku qaaday xafiiska Ra’isalwasaaraha cusub ee wadanka Talyaaniga Enrico Letta, iyadoo ay xiligaasi socotey xaflad lagu dhaarinayey xubnaha dawlada cusub ee Talyaaniga, taasi oo ka dhacdey magaalada Roma.
Weerarkan oo ahaa mid hubaysan ninka geystey waxaa lagu magacaabaa Luigi Preiti, oo 49 sano jir ah oo ahna nin ku shaqeysan jirey shaqada Fuudnimada (dhismaha Guryaha), kaasi oo dhawaan laga eryay shaqadii uu haystey, isla markaana ay la soo daristey shaqo la’aan.
Luigi Preiti, oo ka soo jeeda gobolka Calabria, ee Koonfurta wadanka Talyaaniga halkaasi oo hodon ku ah beeraha, ayna ku yar yihiin falal dambiyeedka balse shaqo la’aan baahsani ka jirto.
Ninkan oo ku hubaysnaa baastoolad kuna labisnaa dharka Suite-ka oo madow ah wuxuu weerar ku ekeeyey ciidamada ilaalada ka ah xafiiska Ra’isalwasaaraha, ka dib markii ciidamadu ay ka joojiyeen in uu gudaha u galo deegaanka uu ku taal xafiiska Ra’isalwasaarah, isagoo toogyey laba askari oo ka mid ah ciidamada loo yaqaan Carabinieri paramilitary police.
Labada askari ee uu ninkan xayraansan uu toogtey mid waxay xabaduhu ka haleeleen luqunta oo xaaladiisa waa laga dayrinayaa, kan kalena waxay ka haleeshay lugta, isagoo lagu dabiibayo Isbitaal.
Ciidamada amaanka oo gardaduub u haya ninkii weerarka geystey
Xeerilaaliyaha magaalada Roma Pierfilippo Laviani wuxuu sheegay in ninkan uu yahay nin wax walba aan haysan oo shaqadiisii lumiyey, isla markaana dhibaatooyin fara badan haystaan.
“Ninkan dhibaatooyin culus ayaa haysta, wuxuu doonayey in uu toogto siyaasiyiinta, laakiin ma aanu awoodin in mid wax gaarsiiyo, balse laba askari ayuu toogtey kuwaasi oo dhaawacyo qaba” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Xeerilaaliyaha.
Ciidamada Booliiska ayaa ninkaasi hareereyey waxayna ku fureen rasaas digniin ah, balse markii dambe xabadihii ayaa ka dhamaaday, waxaana saraakiisha amaanku rumaysan yihin in uu damacsanaa in uu istoogto balse rasaas la’aan ay ku dhacdey.
Wasiirka arimaha gudaha Talyaaniga Angelino Alfano wuxuu xaqiijiyey in ninkan uu doonayey in uu isdilo, balse xabadihii ay ka dhamaadeen, waxaana uu ku qayliyey in ay Booliisku toogtaan isagoo ku qaylinayey “I toogta, i dila, i toogbta”.
Ninka weerarka geystey adeerkiis oo wakaaladaha wararka la hadley wuxuu sheegay in in Preiti uu dhawaan dib ugu soo noqdey guriga waalidkiis isagoo shaqo la’aan ku dhacdey, “Nin shaqo ayuu ahaa, guri ayuu dhisi karaa hoos ilaa kor” ayuu yiri.
Link-ga hoose riix si aad u daawato wakaalada wararka ee AP warbixin ay ka diyaarisay weerarkan oo video muuqaal ah.
SBC International Roma